တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် ငါးဦးသေဆုံး ပြီး ၂၀ကျော်ဒဏ်ရာရ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် ငါးဦးသေဆုံး ပြီး ၂၀ကျော်ဒဏ်ရာရ
တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် ငါးဦးသေဆုံး ပြီး ၂၀ကျော်ဒဏ်ရာရ
အမေရိကန် နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ရာ အနည်းဆုံးငါးဦးသေဆုံးပြီး ၂၀ ကျော်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန် အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
အိုဒစ်ဆာ မြို့နားမှာပစ်ခတ်မှုလုပ်ခဲ့ပြီး ကားတွေ နဲ့ လမ်းဖြတ်ကူးတွေကို သေနတ်သမား ကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း တက္ကဆက်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ကပြောပါတယ်။ ပစ်ခတ်မှု ဟာ မိနစ် ၃၀ ကြာခဲ့ပြီး သေနတ်သမားက အဖြူရောင် တီရှပ်ကို ၀တ်ဆင်ထားတယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေတွေက ပြောပါတယ်။
သေနတ်သမား ဟာ သူ့ကားကို မယူဘဲ အခြား ကားတစ်စီး ကို ခိုးကာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးအိုဒစ်ဆာမြို့ ရှိ ရုပ်ရှင်ရုံအနီးမှာ ထပ်မံပစ်ခတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ရဲတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ရာကနေ သေဆုံးသွားတယ်လို့ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ရဲတွေက ပြောပါတယ်။ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုအတိအကျ မသိသေးကြောင်း၊ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်သုံးဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ကားမှန်တွေလည်း ကွဲခဲ့တယ်လို့ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ က ပြောပါတယ်။
People are evacuated from Cinergy Odessa cinema followingashooting in Odessa, Texas, U.S. in this still image taken fromasocial media video August 31, 2019. Rick Lobo via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
တက်ကဆကျပွညျနယျမှာ ပဈခတျမှုဖွဈပှားခဲ့တဲ့အတှကျ ငါးဦးသဆေုံး ပွီး ၂၀ကြျောဒဏျရာရ
အမရေိကနျ နိုငျငံ တက်ကဆကျပွညျနယျမှာ ပဈခတျမှုဖွဈခဲ့ရာ အနညျးဆုံးငါးဦးသဆေုံးပွီး ၂၀ ကြျောဒဏျရာရသှားခဲ့တယျလို့ အမရေိကနျ အာဏာပိုငျတှကေ ပွောပါတယျ။
အိုဒဈဆာ မွို့နားမှာပဈခတျမှုလုပျခဲ့ပွီး ကားတှေ နဲ့ လမျးဖွတျကူးတှကေို သနေတျသမား ကပဈခတျခဲ့တာဖွဈကွောငျး တက်ကဆကျပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့ ကပွောပါတယျ။ ပဈခတျမှု ဟာ မိနဈ ၃၀ ကွာခဲ့ပွီး သနေတျသမားက အဖွူရောငျ တီရှပျကို ဝတျဆငျထားတယျလို့ မကျြမွငျသကျသတှေကေ ပွောပါတယျ။
သနေတျသမား ဟာ သူ့ကားကို မယူဘဲ အခွား ကားတဈစီး ကို ခိုးကာ ထှကျပွေးသှားခဲ့ပွီးအိုဒဈဆာမွို့ ရှိ ရုပျရှငျရုံအနီးမှာ ထပျမံပဈခတျဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့ပွီး ရဲတှနေဲ့အပွနျအလှနျပဈခတျရာကနေ သဆေုံးသှားတယျလို့ တက်ကဆကျပွညျနယျ ရဲတှကေ ပွောပါတယျ။ ပဈခတျမှုဖွဈရတဲ့အကွောငျးအရငျးကိုအတိအကြ မသိသေးကွောငျး၊ ပဈခတျမှုကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျသုံးဦးဒဏျရာရခဲ့ပွီး ကားမှနျတှလေညျး ကှဲခဲ့တယျလို့ တက်ကဆကျပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့ က ပွောပါတယျ။
Previous articleလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ(၇)ရရှိရေး ၀ါးစိမ်းတောင်ဒေသခံတောင်သူတွေ တောင်းဆို
Next articleကွင်းလယ်လူအိုဇေးလ်ရဲ့ ကြံ့ ခိုင်မှု အတွက် စိုးရိမ်မိကြောင်းနည်းပြ အမ်မရီဆို